Ciidamada Israel Oo Toogtay Falastiini
Muddo bil ah oo ay rabshado socdeen, ayaa waxaa lagu dilay 11 Israa’iiliyiin ah iyo 58 qof oo Falastiiniyiin ah.
Ciidamada ammaanka Israel ayaa sheegay in nin Falastiini ah oo askari ku mindiyeeyey daanta galbeed khamiistii la toogtay, is daranna loo dhaawacay.
Bayaan ay soo saareen, ayay milatariga Israel ku sheegeen in askariga oo lagu mindiyeeyey magaalada Hebron uu qabo dhaawac fudud, halkaasi oo joogitaanka dadka Israa’iiliyiinta ah ay xiisad ka dhalisay.
Muddo bil ah oo ay rabshado socdeen, ayaa waxaa lagu dilay 11 Israa’iiliyiin ah iyo 58 qof oo Falastiiniyiin ah. Israel waxa ay sheegtay in dadka Falastiiniyiinta ah badankood la dilay ayaga oo isku dayaya inay weerar qaadaan ama dad mindiyeeyaan.
Rabshadaha ayaa qarxay markii ay suuqa soo galeen warar sheegayey in Israel ay qorsheyeneyso inay la wareegto xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem, sida masjidka Al-Aqsa. Israel waa ay beenisay wararkaas.
Shabaab Iyo Shacab Ku Dagaallamay Hiiraan
MN: Tababare Abaal-marin la Guddoonsiiyey